ရော်နယ်ဒိုတစ်ယောက် ဘယ်လောက်အထိ နိုင်လိုစိတ်ပြင်းထန်လဲပြောပြသွားတဲ့ မာတွီဒီ – Myan Ball
Posted on June 9, 2019 by hein
ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းရဲ့ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ် ကစားသမား မာတွီဒီက သူ့ရဲ့ ကလပ် အသင်းဖော် ရော်နယ်ဒို တစ်ယောက် ဘယ်လောက် အထိ နိုင်လိုစိတ် စိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်လဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ ကြောင်း သိရှိ ရပါတယ်။ အသက် (၃၄) နှစ် အရွယ် အဆိုပါ ပေါ်တူဂီ လက်ရွေးစင် အသင်း ခေါင်းဆောင် တိုက်စစ်မှူးကြီး ရော်နယ်ဒိုဟာ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ်တွေမှာတောင် နိုင်ပွဲ မရရှိပါက ဒေါသ ပေါက်ကွဲတဲ့ အထိ နိုင်လိုစိတ် ပြင်းထန်တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း မာတွီဒီက မီဒီယာများထံ ဖောက်သည် ချသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ အပြောင်း အရွှေ့မှာ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် အသင်းကနေ ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းကို ကလပ် စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ဖြစ်တဲ့ ပေါင် (၁၀၅) သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိ လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး တိုရီနို အသင်း နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ စီးရီးအေ ပွဲစဉ် တစ်ခုမှာ အသင်း အတွက် ခေါင်းတိုက် သွင်းဂိုး တစ်ဂိုး သွင်းယူ ပေးပြီးနောက် သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ တစ်လျှောက် ခေါင်းတိုက် သွင်းဂိုး (၁၀၀) ပြည့်မြောက် ခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒ့ါအပြင် ရော်နယ်ဒိုဟာ အသင်းရဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ သွင်းဂိုး အများဆုံး နဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှု အများဆုံး ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး စီးရီးအေရဲ့ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ရရှိခဲ့ ပါတယ်။
အဆိုပါ ဆုကို ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ လာလီဂါ နဲ့ အီတလီ စီးရီးအေ မတူညီတဲ့ လိဂ် (၃) ခုမှာ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဆုကို ရယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမား တစ်ဦး အဖြစ်လည်း မှတ်တမ်း ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ရော်နယ်ဒို နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းဖော် မာတွီဒီက “ရော်နယ်ဒို ရောက်ရှိ လာပြီး သူ့ရဲ့ နေ့တဓူဝ လေ့ကျင့်ခန်း တွေကို ကြည့်ရတာက ခင်ဗျား အတွက် သင်ယူ စရာတွေ အများကြီး ရမယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောနိုင်ပါတယ်။ သူက အရာ အားလုံးကို အနိုင်ယူချင်တဲ့ ကစားသမားမျိုးပါ။”
“ခင်ဗျားသာ အရာ အားလုံးကို အနိုင်ရပြီးရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာပြောဖြစ်မယ်ထင်လဲ? လူတွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက ခင်ဗျားဆီ ရောက်လာပြီး ခင်ဗျားက ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက် ထပ်ရှာ ရမလဲ စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ရော်နယ်ဒိုကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူက အမြဲတမ်း အခုထက် မြင့်တဲ့ နေရာ ကို တက်လှမ်းချင်နေတာပါ။ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာလည်း သူက အမြဲတမ်း အနိုင် ရချင်တဲ့ ကစားသမားမျိုးပါ။ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ သူ့ အသင်းက ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင် သူက မပျော်နိုင်တော့ဘဲ သူ ဒေါသထွက်တာလည်း ဟန်ဆောင်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောနိုင်ပါတယ်။” ဟုဖွင့်ဟ ပြောကြားမှုများ ပြုလုပ် သွားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ကလပ် အသင်းတွေရဲ့ ဘောလုံး ရာသီ က ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး ရော်နယ်ဒိုကလည်း သူ့ရဲ့ မိခင် နိုင်ငံ အသင်းဖြစ်တဲ့ ပေါ်တူဂီ အသင်းနဲ့ အတူ နေးရှင်းလိဂ် ပွဲစဉ်များ အတွက် ပူးပေါင်း လေ့ကျင့်လျက် ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲရဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ် အဖြစ် ဆွစ်ဇာလန် အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့ရတဲ့ ပွဲစဉ်မှာလည်း ရော်နယ်ဒိုက ဟက်ထရစ် သွင်းယူ နိုင်ခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီ အသင်းကို ဗိုလ်လုပွဲ အဆင့် အထိ ပို့ဆောင် ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီ အသင်းဟာ နေးရှင်းလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ အဖြစ် တစ်ဖက်မှာ အင်္ဂလန် အသင်းကို အနိုင်ယူလာတဲ့ နယ်သာလန် အသင်းနဲ့ ဒီနေ့ညမှာ ရင်ဆိုင် ကစား သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိ ရပါတယ်။
ဂြူဗငျတပျဈ အသငျးရဲ့ ပွငျသဈ လကျရှေးစငျ ကှငျးလယျ ကစားသမား မာတှီဒီက သူ့ရဲ့ ကလပျ အသငျးဖျော ရျောနယျဒို တဈယောကျ ဘယျလောကျ အထိ နိုငျလိုစိတျ စိတျဓာတျ ပွငျးထနျလဲ ဆိုတဲ့ အကွောငျးကို ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ ကွောငျး သိရှိ ရပါတယျ။ အသကျ (၃၄) နှဈ အရှယျ အဆိုပါ ပျေါတူဂီ လကျရှေးစငျ အသငျး ခေါငျးဆောငျ တိုကျစဈမှူးကွီး ရျောနယျဒိုဟာ လကေ့ငျြ့ခနျး အစီအစဉျတှမှောတောငျ နိုငျပှဲ မရရှိပါက ဒေါသ ပေါကျကှဲတဲ့ အထိ နိုငျလိုစိတျ ပွငျးထနျတဲ့ ကစားသမား တဈဦး ဖွဈကွောငျး မာတှီဒီက မီဒီယာမြားထံ ဖောကျသညျ ခသြှားခဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။
ရျောနယျဒိုဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှရောသီ အပွောငျး အရှမှေ့ာ ရီးရဲယျမကျဒရဈ အသငျးကနေ ဂြူဗငျတပျဈ အသငျးကို ကလပျ စံခြိနျတငျ ပွောငျးရှကွေ့ေး ဖွဈတဲ့ ပေါငျ (၁၀၅) သနျးနဲ့ ပွောငျးရှေ့ ရောကျရှိ လာခဲ့တာ ဖွဈပွီး တိုရီနို အသငျး နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ စီးရီးအေ ပှဲစဉျ တဈခုမှာ အသငျး အတှကျ ခေါငျးတိုကျ သှငျးဂိုး တဈဂိုး သှငျးယူ ပေးပွီးနောကျ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ တဈလြှောကျ ခေါငျးတိုကျ သှငျးဂိုး (၁၀၀) ပွညျ့မွောကျ ခဲ့ပွီး ဖွဈတဲ့ ကစားသမား တဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒ့ါအပွငျ ရျောနယျဒိုဟာ အသငျးရဲ့ ပွိုငျပှဲစုံ သှငျးဂိုး အမြားဆုံး နဲ့ ဂိုးဖနျတီးမှု အမြားဆုံး ကစားသမား တဈဦး ဖွဈခဲ့ပွီး စီးရီးအရေဲ့ တဈနှဈတာ အကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုကို ရရှိခဲ့ ပါတယျ။
အဆိုပါ ဆုကို ဆှတျခူး နိုငျခဲ့တဲ့ ရျောနယျဒိုဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ၊ လာလီဂါ နဲ့ အီတလီ စီးရီးအေ မတူညီတဲ့ လိဂျ (၃) ခုမှာ တဈနှဈတာ အကောငျးဆုံး ကစားသမား ဆုကို ရယူ နိုငျခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမား တဈဦး အဖွဈလညျး မှတျတမျး ဝငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး ရျောနယျဒို နဲ့ ပတျသကျပွီး ဂြူဗငျတပျဈ အသငျးဖျော မာတှီဒီက “ရျောနယျဒို ရောကျရှိ လာပွီး သူ့ရဲ့ နတေ့ဓူဝ လကေ့ငျြ့ခနျး တှကေို ကွညျ့ရတာက ခငျဗြား အတှကျ သငျယူ စရာတှေ အမြားကွီး ရမယျ ဆိုတာ ကြှနျတျော ပွောနိုငျပါတယျ။ သူက အရာ အားလုံးကို အနိုငျယူခငျြတဲ့ ကစားသမားမြိုးပါ။”
“ခငျဗြားသာ အရာ အားလုံးကို အနိုငျရပွီးရငျ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ဘာပွောဖွဈမယျထငျလဲ? လူတှရေဲ့ တုံ့ပွနျမှုက ခငျဗြားဆီ ရောကျလာပွီး ခငျဗြားက ပိုကျဆံ ဘယျလောကျ ထပျရှာ ရမလဲ စဉျးစားပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ ရျောနယျဒိုကတော့ မဟုတျပါဘူး။ သူက အမွဲတမျး အခုထကျ မွငျ့တဲ့ နရော ကို တကျလှမျးခငျြနတောပါ။ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာလညျး သူက အမွဲတမျး အနိုငျ ရခငျြတဲ့ ကစားသမားမြိုးပါ။ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ သူ့ အသငျးက ရှုံးနိမျ့ခဲ့ရငျ သူက မပြျောနိုငျတော့ဘဲ သူ ဒေါသထှကျတာလညျး ဟနျဆောငျတာ မဟုတျဘူးဆိုတာ ကြှနျတျော ပွောနိုငျပါတယျ။” ဟုဖှငျ့ဟ ပွောကွားမှုမြား ပွုလုပျ သှားခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိ အခြိနျမှာတော့ ကလပျ အသငျးတှရေဲ့ ဘောလုံး ရာသီ က ပွီးဆုံးခဲ့ပွီ ဖွဈပွီး ရျောနယျဒိုကလညျး သူ့ရဲ့ မိခငျ နိုငျငံ အသငျးဖွဈတဲ့ ပျေါတူဂီ အသငျးနဲ့ အတူ နေးရှငျးလိဂျ ပှဲစဉျမြား အတှကျ ပူးပေါငျး လကေ့ငျြ့လကျြ ရှိပါတယျ။ အဆိုပါ ပွိုငျပှဲရဲ့ ဆီမီးဖိုငျနယျ အဖွဈ ဆှဈဇာလနျ အသငျးနဲ့ ကစားခဲ့ရတဲ့ ပှဲစဉျမှာလညျး ရျောနယျဒိုက ဟကျထရဈ သှငျးယူ နိုငျခဲ့ပွီး ပျေါတူဂီ အသငျးကို ဗိုလျလုပှဲ အဆငျ့ အထိ ပို့ဆောငျ ပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပျေါတူဂီ အသငျးဟာ နေးရှငျးလိဂျ ဗိုလျလုပှဲ အဖွဈ တဈဖကျမှာ အင်ျဂလနျ အသငျးကို အနိုငျယူလာတဲ့ နယျသာလနျ အသငျးနဲ့ ဒီနညေ့မှာ ရငျဆိုငျ ကစား သှားမှာ ဖွဈကွောငျးလညျး သိရှိ ရပါတယျ။